တရုတ် Galvanized စတုရန်းပြွန်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
နိဒါန်း သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းစတီးပိုက်များသည် နှစ်ဖက်ညီသော သံမဏိပိုက်များဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းကို strip steel ထဲသို့လှိမ့်ထားသည်။ယေဘူယျအားဖြင့် သံမဏိကို ထုပ်ပိုးပြီး ပြားသွားအောင် ဖိထားပြီး အဝိုင်းပြွန်ထဲသို့ ဂဟေဆော်ကာ၊ ထို့နောက် အဝိုင်းပြွန်ကို စတုရန်းပြွန်အဖြစ် လှိမ့်ကာ လိုအပ်သည့် အရှည်အထိ ဖြတ်တောက်သည်။
1. နံရံအထူ 10mm ထက်နည်းသောအခါ သွပ်ရည်စတုရန်းစတီးပိုက်၏ နံရံအထူ၏ ခွင့်ပြုနိုင်သော သွေဖည်မှုမှာ နံရံအထူထက် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ် 10% ထက်မပိုစေရပါ။ 10mmနံရံအထူ၏ 8% ကိုနုတ်ပါ။နံရံအထူကလွဲလို့ အဆစ်ဧရိယာ။
2. သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းစတီးလ်ပိုက်၏ ပုံမှန်ပေးပို့မှုအရှည်မှာ 4000mm-12000mm ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ 6000mm နှင့် 12000mm ဖြစ်သည်။ထောင့်မှန်စတုဂံပိုက်များကို 2000mm ထက်မနည်းသော ပိုက်တိုများနှင့် ပုံသေမဟုတ်သော ထုတ်ကုန်များကို ပေးပို့ခွင့်ပြုထားပြီး အင်တာဖေ့စ်ပိုက်များပုံစံဖြင့် ပေးပို့နိုင်သော်လည်း ဝယ်ယူသူသည် ၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါတွင် ကြားခံပိုက်များကို ဖြတ်တောက်သင့်သည်။တိုတောင်းသော၊ ပုံသေမဟုတ်သော အရှည်ထုတ်ကုန်များ၏ အလေးချိန်သည် စုစုပေါင်းပေးပို့မှုပမာဏ၏ 5% ထက်မပိုစေရ၊ သီအိုရီအရ အလေးချိန် 20kg/m ထက်ကြီးသော စတုရန်းပုံစတုရန်းပြွန်သည် စုစုပေါင်းပေးပို့မှုပမာဏ၏ 10% ထက်မပိုစေရပါ။
3. တစ်မီတာလျှင် သွပ်ရည်စတုရန်းစတီးလ်ပိုက်၏ ကွေးကောက်မှုသည်2မီလီမီတာထက် မပိုဘဲ၊ စုစုပေါင်း ကွေးကောက်မှုသည် စုစုပေါင်းအရှည်၏ 0.2% ထက် မပိုပါ။
ပစ္စည်း A53၊ A283-D၊ A135-A၊ A53-A၊ A106-A၊ A179-C၊ A214-C၊ A192၊ A226၊ A315-B၊ A53-B၊ A106-B၊ A178-C၊ A210-A- 1, etc.
နံရံအထူ: 0.5mm-40mm, သို့မဟုတ်လိုအပ်သလို။
ပြင်ပအချင်း- 50*50mm-1000*1000 mm, သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို။
လျှောက်လွှာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်၊ သတ္တုဗေဒလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာသုံးယာဉ်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးဖန်လုံအိမ်၊ မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ မီးရထား၊ အဝေးပြေးကားလမ်း၊ ကွန်တိန်နာဘောင်၊ ပရိဘောဂများ၊ အလှဆင်ခြင်း၊ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံစသည်တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာသည် အလွန်ပူပြင်းပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သာယာသောစကားပြောဆိုမှုများရှိကာ နောက်ဆုံးတွင် အများသဘောတူသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။
Galvanized Square Steel Tube ၊
Galvanized Square Steel Tube စက်ရုံ
Square Steel Tube စက်ရုံ